Tsy navelam-badiny hoentina any amin’ny hopitaly : maty tao an-tranony ilay vehivavy bevohoka noho ny tahotra pesta | NewsMada
Tsy navelam-badiny hoentina any amin’ny hopitaly : maty tao an-tranony ilay vehivavy bevohoka noho ny tahotra pesta
Notazonin-drangahy fotsiny tao an-tranony, ny vadiny bevohoka izay efa nihetsi-jaza. Nanda tsy hitondrana ity farany ho eny amin’ny hopitaly izy noho ny tahotra sao hifindran’ny valanaretina pesta. Vokany, niakatra ny hafanan-dramatoa, nitambotsotra avy eo ary namoy ny ainy, niaraka tamin’ny zaza tao an-kibony, ny alin’ny alakamisy teo.
Manjaka loatra ny tsaho ao Toamasina momba ity resaka valanaretina pesta ity. Misy tsy sahy manatona hopitaly ireo marary noho ny tahotra. Niafara tamin’ny fahafatesam-badiny ny tandrevaka niharo tahotra teo amin’ny raim-pianakaviana iray monina ao amin’ny Lot 127 Cn.3 Analankinina Hopitalibe parisela 12 / 21 – 22, ny afakomaly tamin’ny 10 ora alina. Noho ny tahotra hanatona hopitaly dia namoy ny ainy tao an-tranony ny vadiny mitondra vohoka efa miandry andro hahaterahana. Araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana, nihetsi-jaza ilay ramatoa tamin’io afakomaly alina io ka nentin’ilay vadiny nanatona rasazy mampiteraka. Nilaza anefa ilay rasazy fa misy hafanana sady mikohaka be ilay ramatoa ka tsara raha hoentina haingana any amin’ny hopitaly mba hahafahana mijery tsara ny soritr’aretina ao aminy. Noho ny tahotra anefa, tsy nanaiky ny hitondra am-badiny bevohoka ho eny amin’ny hopitaly ilay raim-pianakaviana fa nentiny niverina avy hatrany tany an-tranony. Nihevitra hitady dokotera hafa indray anefa ilay rangahy vadiny hitondra ilay renim-pianakaviana efa nolazoin’ny aretina. Tsy naharesy tosika ny aretina intsony anefa ilay renim-pianakaviana nitondra vohoka ka nitambotsotra tao an-trano ka namoy ny ainy avy hatrany niaraka tamin-janany tao an-kibony.
Tsy aretina pesta anefa ny nahazo ilay renim-pianakaviana…
Voamarina nandritra ny fitiliana rehetra nataon’ny BMH sy ny sampandraharaha misahana ny fitiliana ny areti-mifindra sy tratra ary ny avokavoka ao amin’ny PPH Toamasina fa tsy voan’ny valanaretina pesta ilay renim-pianakaviana fa aretina tsotra no nahazo azy. Nihevitra anefa ilay raim-pianakaviana vadiny fa hoe sao lazain’ny dokotera hoe pesta ny aretina mahazo am-badiny rehefa tonga eny amin’ny hopitaly ka naleony tsy nentina teny mihitsy na efa nolazoin’ny aretina aza.
Nanamafy anefa ny talen’ny Hopitalibe Analankinina, ny profesora Rasolonjatovo Jean de la Croix fa entinina ny rehetra mba hanatona hopitaly avy hatrany raha vao misy aretina hafahafa amin’ny vatana fa mampitera-doza eo amin’ny fahasalaman’ny tsirairay ny fanaovana dokotera tena. “Mazava ny fomba fandraisana olona ato amin’ny Hopitalibe. Samy manana ny toerana sy ny karazana aretina mahazo azy. Eny amin’ny maternite teo aloha ny fitsaboana ny valanaretina pesta fa ety amin’ny hopitaly amoron-dranomasina kosa ny fitsaboana ny karazan’aretina hafa sy ny fiterahana”, hoy hatrany ny talen’ny Hopitalibe Toamasina.
Mandositra ny hopitalim-panjakana ny marary sy ny mpiteraka amin’izao fotoana izao noho ny tsaho iniana aely momba ny hoe na olona hiteraka aza dia avadiky ny mpiasan’ny hopitaly fa hoe voan’ny pesta. Vokany, lasa mandositra ny hopitaly ny mpiteraka sy ny mpitondra mpiteraka ka loza tsy roa aman-tany toy izao ny niafarany.